Kumanaan ka banaan-baxay guusha Trump gudaha Mareykanka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldKumanaan ka banaan-baxay guusha Trump gudaha Mareykanka
November 10, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Guushii Donald Trump oo horseeday in banaan-baxyo ay ka dhacaan Mareykanka oo dhan. [Sawirka: NBC News]
Washington-(Puntland Mirror) Kumanaan dad ah ayaa isugu soo baxay wadooyinka dhowr magaalo oo kuyaala Mareykanka si ay uga banaan-baxaan guusha la yaabka leh ee Donald Trump ee uu ka gaaray doorashada madaxtinimada Mareykanka, iyaga oo cambaareynaya hadaladiisa ku aadan dadka soo galootiga ah, Muslimiinta iyo kooxo kale.
Arbacadii fiidkeedii, kumanaan banaan-baxayaal ah ayaa kusooo xoomay wadooyinka Manhattan iyo New York City. Dadka qaar baa gubay calanka Mareykanka ilaa ay ka gaareen dhismaha Trump iyagoo qaarkood ay ku heeseen, “Maahan madaxweynahayaga.”
Si kastoo ay ahaataba markii la doortay kadib Donald Trump ayaa khudbadii uu jeediyay ku sheegay in uu yahay madaxweynaha dhammaan Mareykanka isagoo sheegay: “Waa wakhtigii aynu wadajiri lahayn sida dad midaysan.”